JAMES SWAN oo ka digay halis kasoo socota khilaafka Farmaajo iyo R/W Rooble - Bulsho News
JAMES SWAN oo ka digay halis kasoo socota khilaafka Farmaajo iyo R/W Rooble
Garoowe (Caasimada Online) – Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan, oo maanta magaalada Garoowe kula kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni, ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka ay walaac ka qabaan khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble.
James Swan ayaa sheegay in beesha caalamka ay rumeysan tahay in khilaafka madaxda Soomaalida uu halis ku yahay hanaanka doorashooyinka dalka ka socda.
“Waxaan kala hadalnay Deni dedejinta wejiga xiga ee doorashooyinka, oo ah doorashada Golaha Shacabka. Waxaan la wadaagnay walaaca beesha caalamka ay ka qabto halisaha ay khilaafyada taagan ee u dhaxeeya madaxda qaranka kusoo rogi karaan hanaankan,” ayuu yiri James Swan oo shir jaraa’id ku qabtay Garoowe.
Waxa uu sheegay in wafdigii uu hoggaaminayey iyo madaxweyne Deni ay isku raaceen in madaxda Soomaalida ay sii wadaan inay wada-shaqeeyaan, si ku dhisan midnimo qaran, ayna ka guuleystaan khilaafyadooda.
“Waxaan dhammaan ku boorineynaa inay horey u socdaan, si ay uga dhabeeyaan ballan-qaadyadooda ah inay qabanayaan doorashooyin qaran oo la isku haleyn karo, kuna dhacwa waqtigooda, si waafaqsan heshiiska 27-ka May,” ayuu yiri James Swan.
Hadalka James Swan ayaa imanaya ayada oo ay burbureen wada-hadallo u socday Farmaajo iyo Rooble, oo ay dhex-dhexaadinayeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor.
Wada-hadalladaas ayaa u burburay kadib markii Farmaajo uu ku adkeystay in taliyaha NISA iyo wasiirka amniga laga dhigo xubno isaga daacad u ah, islamarkaana xilalka laga qaado taliye Bashiir Goobe iyo wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Farmaajo ayaa sidoo kale doonaya inaan la baarin kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo dilkeeda lagu tuhmayo hay’adda NISA.
Qarax is-miidaamin ah oo goor dhow ka dhacay...
Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya
China’s Xi vows ‘reunification’ with Taiwan, but holds...
Ciyaaraha: Cristiano Ronaldo oo ku biiray Manchester United
Gedo: Saldhigyo Al-shabaab leeyahay oo la duqeeyey
Rooble ” Waxaan ku baaqayaa shir deg deg...
S.Korea, China hold talks over N.Korea missile test,...
Romelu Lukaku Oo Kashifay Sababta Uu U Necebyahay...
Midowga Musharixiinta: “Farmaajo danta Qaranka waxaa kala weyn...
Axmed Madoobe Oo La Kulmay Taliyaha Ciidamada Maraykanka...
Yaa ka dambeeyey warqada laga faafiyey R/W Rooble,...
Doorashada Canada: Maxay daneynayaan Soomaalida?